GREENHOUSES XILLIGA QABOOBAHA: MIYAY BARAFKA LA GELINAYAA AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO? SIDA LOO DARYEELO AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO XILLIGA JIILAALKA? - DHISMAYAASHA
Dhamaan xeerarka daryeelka ee aqalka dhirta lagu koriyo ee xilliga qaboobaha
Dhamaanteen waan ognahay in aqalka dhirta lagu koriyo beerta xayawaanku waa mid aan lagama maarmaan u ah koritaanka noocyo kala duwan oo ah dalagyada kulaylka jecel.
Sidaas, daryeel ku habboon iyada, iyo ma aha oo kaliya guga, marka aynu u diyaargaroobeyno beerashada xilli cusub, laakiin xilliga jiilaalka, guud ahaan sanadka oo dhan, waa waqti aad u muhiim ah.
In this article waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa sida loo daryeelo aqalka dhirta lagu koriyo xilliga jiilaalka, sida loo diyaariyo xilliga guga xilli cusub iyo waxa loo baahan yahay in la sameeyo carrada gudaha.
Diyaarinta aqalka dhirta lagu koriyo ee guga xilli ciyaareedka cusub
Isla markiiba bilawga maalmaha ugu horeeya ee kulul ee aqalka dhirta lagu koriyo, shaqada firfircoon wuxuu bilaabmaa inuu ku beero khudradda. Ku bilaw dharkaaga oo dhan iyo daaweynta derbiga gudaha iyo dibadda. Ku samee biyo diirran adigoo raacinaya saabuunta. Ha isticmaalin kiimikada kiimikada. Haddii aan si dhaqso ah looga saari karin wasakhda, iyaga qoyi oo dhaqso ka dib wakhti yar ka dib. Qaybaha wasakhda ayaa la dhaqayaa ka dib tan.
MUHIIM! Ha isticmaalin burushyada iyo burooyinka adag si aad u nadiifiso derbiyada, maadaama ay waxyeeleyn karaan lakabka ilaalinta polycarbonate.
Ka dib markii aad dhaqday derbiga lagu daaweeyo mashiinka lime jilicsan500 garaam halkii 10 litir). Nadiifinta waa lagama maarmaanka ma aha oo kaliya derbiyada, laakiin sidoo kale ciidda.
Iyada waxay daadiyeen xal sulphate copper. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa lime beeraha, kala firdhin 50 g mitir labajibbaaran. Bedel ahaan, sariiraha waxaa lagu daadi karaa biyo karkaraya, ka dibna hawo kululeyn oo qalaji carrada.
Sida kugula talin leh bannaanka u khibrad leh, ka fiican si aad uga saarto lakabka carrada ee ku saabsan 7 sentimitir - Waxay soo ururisaa tiro badan oo ah fangaska iyo cayayaanka, si aad uga takhalusto dhibaatooyin badan.
Haddii aysan suurtagal ahayn in la badalo ciidda, waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo jeermis aaladaha noolaha, kuwaas oo si ballaadhan loogu heli karo suuqyada dhowaan. Diyaargarasyadan oo kale, marka lagu daro jeermi-dilista, waxay sidoo kale gacan ka geysaneysaa kordhinta bacriminta carrada. Waxay ku hagaajinayaan nitrogen-ka, ka saarida birta culus, kor u qaadista qashinka sunta cayayaanka ee ku haray carrada. Ka dib marka la daaweeyo alaabooyinka bayoolojiga ah, hawo-gelinta aqalka dhirta lagu koriyo looma baahna, isla markiiba waxaad ku bilaabi kartaa shaqo.
Daryeelka guga ee aqalka dhirta lagu koriyo waxaa sidoo kale ku jira kormeerida qaababka taageerada. Qoryaha geedo jeegaree rotting of elementary shakhsi, birta - si joogta ah ee leh meelaha dunta ah. Dhammaan alaabta aan la isticmaali karin waa in laga saaraa ama la hubiyaa.
DAREEN! Faahfaahinta qaabka birta ah, taas oo ay ku jireen raadkii miridhku, rinjiga daloolka.
Si kor loogu qaado bacriminta ciidda guga ee ku jira compost iyo caleen isku dar ah ayaa lagula talinayaa. Loosening wuxuu ka caawiyaa hirgelinta peat iyo ciid. Kadib samaynta waxyaabahaas, carrada waa la qodayaa.
Guryo-beereedka waxaa laga samayn karaa qalab kala duwan oo leh qalab kala duwan. Boggayaga waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo faa'iido leh oo ku saabsan noocyo kala duwan.
Akhri dhammaanba meelaha lagu koriyo ee Nederlandiga ah, Shirkada Shiineeyska ah iyo kulul-dhirta.
Kaga koritaanka gudaha aqalka dhirta lagu koriyo ee dalagyada kala duwan waxay keenaysaa dhamaystiran dhamaystiran xilliga xagaaga. Sidaa darteed, ka hor inta aadan bilaabin si ay u koraan dufanka soo socda ee dhirta, ciidda waa in lagu naqshadeeyo macdan iyo shuban.
Wanaagsan hawshan. humus ciid iyo Bacriminta macdanta adag. Humus waxaa ku jira wax badan oo macdan ah oo lagama maarmaan u ah horumarinta dhirta. Iyadoo ay weheliso maadooyinka nafaqada ee nafaqada ah waxay ku dhacaan ciidda. Waxa kale oo uu carrada ka dhigaa dabacsan, neefsaan iyo hawada la gooyo.
Laakiin waa inaadan dhicin khudaar badan - xididdada dhirta ayaa bilaabi doonta inay qalajiso, ama dhirta caleemaha waxay bilaabi doontaa dhibka of fruiting.
Waxay faa'iido u tahay dhirta iyo dhulka cawska, oo ay ku jiraan tiro badan oo ah xididdada caleemaha iyo geedaha. Waxyaalaha noocan oo kale ah waxay ka caawisaa in la kordhiyo nuugista qoyaanka iyo uumeysiga nafaqooyinka.
Wixii diyaarinta cawska, lakabka sare ayaa marka hore la saaro, ka dibna dillaacday, ku shubay lime. Qaadidda dhererka 1.5 mitir. Humus waxaa lagu shubaa sariiro sariiro ah. In geeddi-socodka dillaacsan ku dul daadi jiray slurry iyo marmarka qaarkood.
TALO! Ciidda Sod waa in la goosto beeraha iyo beedka. Waa inaadan qaadan mid ka mid ah kuwa ku xiga agagaaraha aagga biyaha ah, sida ciidda iyaga ku jirta waa mid aad u macaan.
Miyaa lagama maarmaan in barafka lagu tuuro aqalka dhirta lagu koriyo xilliga jiilaalka?
Waa maxay sababta barafka looga dhigo aqalka dhirta lagu koriyo? Tallaabooyin muhiim ah oo lagu ilaalinayo qiimaha nafaqada ee ciidda waa in laga ilaaliyo qulqulka qoto dheer inta lagu jiro xilliga qaboobaha jiilaalka. Goobta furan waxaa laga ilaaliyaa in ay barafka ku daboosho barafka, laakiin xilliga qaboobaha barafku ma geli karo aqalka dhirta lagu koriyo. Sidaas awgeed waa in lagu dhejiyaa meher ahaan. Barafka lagu koriyo ayaa loo baahan yahay! Marka dhalaalinta, waxay ku qoyi doontaa ciidda oo u diyaariso beeritaanka.
Ka hor inta aanad barafka ku dhex darin aqalka dhirta lagu koriyo, waxaa lagula talinayaa in ay qaaddo daaweynta jeermi-tirka dayrta si ay cudurada iyo cayayaanka aan loo badbaadin barkin baraf ah.
DAREEN! Ha ku dhex tuurin dhirta lagu koriyo, halkii lakabka yar oo daboolaya dusha. Haddii uu jiro baraf aad u badan aqalka dhirta lagu koriyo, beeritaanka dhirta ayaa la dhigayaa ilaa ciidda ay soo baxaan.
Si kastaba ha noqotee, dabeecadda si aad u walaaqto barafka aqalka dhirta lagu koriyo maaha mid aan la garanaynin. Qaar ka mid ah beeralayda khibrad leh waxay aaminsan yihiin in tani aysan daruuri ahayn, maadaama barafku uu daahiyo wakhtiga diiran ee carrada ee aqalka dhirta lagu koriyo.
In fiidiyowgaan, waxaad arki doonaa sida iyo inta jeer ee barafka waayo-aragnimo leh waayo-aragnimo leh ee lagu seexdo ee lagu koriyo ah ee xilliga qaboobaha:
Laguma talin karo inaad barafka ku tuurto qolka, haddii goobtaadaadu ku taal meel ku dhow biyaha dhulka hoostiisa. Xaaladdan oo kale, foomamka faaruqa ee aan ciriiri lahayn ee aqalka dhirta lagu koriyo, iyo wakhti dheer ma awoodi doontid inaad ku beerato dhirta.
Heerka ugu dambeeya ee tababarka guga waa kuleylka dhulka.
Geedo aan lagu meelayn karaa ciidda kulaylka ah, waxay bilaabi doontaa in ay waxyeeleeyaan oo xidid si liidata, taas oo hubaal saameyn doona dhalidda. Way fiicantahay haddii ay jiraan sariiro diiran aqalka dhirta lagu koriyo.
Kobcinta kuleylka qodidda ciiddasi ay u hesho hawada kuleylka sida ugu dhakhsaha badan.
Sidoo kale dhulku wuu awoodaa daadi biyo diirran. Sidoo kale waxtar leh daboolka ciidda leh filim madow. Waxay ku jirtaa xaaladahan in heerkulka ciidda kor u kaco, oo si deg deg ah u diyaar garoobaan beeritaanka.
Haddii ay suurtogal tahay, kululeeyaha waxaa la gelin karaa aqalka dhirta lagu koriyo dhawr maalmood. Tani waxay noqon kartaa kululeeyaha casriga ama habka kuleylka kale. Ku saabsan waxa kulaylinta leh kuleylka, akhriso maqaalkan.
Marka lagu daro waraabinta iyo diirinta aqalka dhirta lagu koriyo, waxaa muhiim ah in la doorto qalabka saxda ah iyo qalabka kale.
Akhri waxyaabaha muhiimka ah ee ku saabsan habka waraabinta waraabka iyo ururinta hawada.
Bilowga diyaarinta aqalka dhirta lagu koriyo ee jiilaalka waa nadiifinta dayrta. Dhammaan hadhaaga dhirta lagu koriyo waa in laga saaraa oo la gubaa. Isla markiiba, adiga oo aan sugin guga, ka saar lakabka sare ee carrada taas oo fangaska waxyeellada leh ay ku urursan yihiin xagaaga.
Kormeer ciidda loogu talagalay joogitaanka dirxiga cayayaanka ee ku yaala, iyaga oo raadinaya, soo aruuri. Nadiifi dhamaan dusha gudaha ee wasakhda. Ka dib markaa, samee foollo fangaska ah oo daboolan oo dabaysha lagu koriyo.
MUHIIM! Guryaha dhirta polycarbonate oo leh qaab bir ah, ma isticmaali kartid bamka qiiqa sigaarka - waxay burburiyaan lakabka polycarbonate iyo birta way ka sii daraysaa.
Waxaa laga yaabaa in keliya isticmaalka jeegarayaasha "Vist", oo ku salaysan tibentazola.
Waa hagaagayaa derbiyada shan boqolkiiba oo qaabab ah. Way ka fiican tahay in lagu buufiyo derbiyada leh qoryaha buufinta. Ka dib markii la shaqeynayo, qolka ku xir ilaa hal maalin.. Kadibna fur oo hawo. Ku dhaq oo jeermi dhammaan wadooyinka ee lagu koriyo.
Sida loo daryeelo aqalka dhirta lagu koriyo xilliga jiilaalka? Si qaab-dhismeedka aqalka dhirta lagu koriyo ee xilliga qaboobaha aanad ku dhejin miisaanka barafka, waa in la xoojiyaa.
Waxaa si gaar ah muhiim u ah in tan la sameeyo haddii sawirkaagu uu ka fog yahay gurigaaga oo aadan ka nadiifin karin daboolka barafka laga bilaabo aqalka dhirta lagu koriyo.
Qaybaha taageerada ee qaab-dhismeedku waa taageerooyin kala duwan, kaas oo u qaybiya miisaanka, adoo saaraya dusha sare.
Taageerooyinka waxaa lagu dhejiyaa qoraalka iyo dhinacyada qaababka. Lambarkoodu waa inay ahaadaan mid kasta oo hal mitir iyo hal mitir ah la xoojiyo.
MUHIIM! Waxaad u baahan tahay inaad hagaajisid qalabka si aysan u boodin oo aan baqin dusha.
U hubso inaad dhigto tuubbo ama dhagax hoos hoose ee taageerada si aysan dhulka ugu dhicin.
Si adag u xir dhammaan dhammaan dariiqyada iyo hawada, nidaamyada asaasiga ah. Eeg aasaaska xiro dhammaan dildilaaca. Ma suurtagal tahay in tallaabo laga baxo guga, sababtoo ah inta lagu jiro xilliga qaboobaha dhammaan godadka waa in lagu daboolaa burbur dheeraad ah.
Xilliga qaboobaha, waxaad u baahan tahay inaad daboosho si joogto ah u nadiifi barafka. Kaliya ha ku sameynin majarafad, sida aad u dhaawici karto dusha. Waa lagama maarmaan in la shaqeeyo qalab ama alaab alwaax ah. Waa mid aad u habboon in la shaqeeyo buraash baraf ah oo leh qalabka telescopic.
DAREEN! Haddii xilliga kuleylka barafku barafeeyo dusha sare ee polycarbonate, ha isku dayin inaad xoqdo, waad dhaawici kartaa dusha sare. Xagashad kasta waxay hoos u dhigtaa daahfurka.
Barafka waa in sidoo kale laga fogaadaa derbiyada dariiqyada oo dhan, maxaa yeelay miisaanka qulqulka barafka ayaa lumin kara qaabkeeda.
Laguma talineynin in albaabka laga dhigo aqalka dhirta lagu furo xilliga jiilaalka. Under gusts of dabaysha, waxay ka beddeli kartaa aasaaska, iyo xitaa xarkaha polycarbonate ka soo bixi kartaa. Isla mar ahaantaana, inta lagu jiro xilliga xagaaga waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah u hawo qaboojiyaan qolka, gaar ahaan inta lagu jiro tuubooyinka.
U hoggaansanaanta xeerarka daryeelka ee aqalka dhirta lagu koriyo ah ee sanad walba ee sanadka waxay kordhineysaa noloshooda adeegga tobanaan sanadood.